Huawei Watch GT3 dia fanokanana fomba mahomby [Fandinihana] | Gadget News
Huawei Watch GT3 dia fanokanana fomba mahomby [Fandinihana]
Miguel Hernandez | 01/12/2021 09:00 | Nohavaozina amin'ny 27/11/2021 16:55 | Gadgets, General, hevitra, SmartWatch
Ao amin'ny lamaody ny fitaovana azo ampiasaina, na dia toa tsy nifarana aza izy ireo, tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia teo aza ny fiatoana nateraky ny areti-mifindra, ireo famantaranandro maranitra ireo dia nanjary nalaza noho ny fampiasany tsy tambo isaina ary mazava ho azy ny fanatsarana ny fahombiazany. Raha izany dia Huawei dia efa ela no nanolotra ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra ao amin'ny faritany ny smartwatches, ary mbola ho toy izany hatrany.
Izahay dia mandinika ny Huawei Watch GT 3 vaovao dia voarakitra ho fanatsarana ny dikan-teny teo aloha ary mitazona ny fanoloran-tenany mafy amin'ny Harmony OS. Manadihady ny smartwatch Huawei farany sy mahery indrindra izahay hatramin'izao, fantaro miaraka aminay.
1 Famolavolana azo fantarina sy mahomby
3 Sensors sy ny fampiasana isan-karazany
4 Fampiofanana, fampiasana ary fahaleovan-tena
Famolavolana azo fantarina sy mahomby
Amin'ity tranga ity, Huawei dia tsy te hiala amin'ny kanonany momba ny famantaranandro maranitra, mitazona ny lafiny famantaranandro nentim-paharazana lavitra izay tadiavin'ny marika hafa toa an'i Apple sy Xiaomi. Manana boaty roa izahay, 42,3 x 10,2 milimetatra ary 46 x 10,2 milimetatra arakaraka ny filantsika. Ny famantaranandro dia milanja 35/43 grama eo ho eo tsy misy tady, ary mahatsapa ho voadio sy voaorina tsara izy io, ary toy ny mahazatra amin'ny marika sinoa. Raha ny modely nohadihadiana dia misy ny tady hoditra volontsôkôlà sy ny vata vy tsy misy pentina amin'ny loko voajanahary, kanto ary maro samihafa.
Dikan-teny: 42 sy 46 millimeters, nentim-paharazana sy «sport»
Loko: Volamena, Rose Gold, Steel ary Black.
Tady: Milanese, silicone, hoditra ary vy.
Fametahana seramika amin'ny lamosina
Amin'ity lafiny ity dia efa fantatsika fa manana dikan-teny miaraka amin'ny tanana faharoa amin'ny frame na nentim-paharazana miankina amin'ny modely voafidy sy ny haben'ny efijery. Tokony holazaina, mba tsy hampisavoritaka ny mpamaky, fa mamakafaka ny dikan-teny 46-milimeter miaraka amin'ny fehin-koditra vita amin'ny hoditra volontsôkôlà sy ny casing vy nentim-paharazana. Raha ny fijeriko azy, ny famantaranandro dia mitazona ny ampahany tsara, ny endrika tsy azo ovaina ary ny fahatsapana ny fahaiza-manaony sy ny hakantony manan-danja, dia afaka miaraka aminao amin'ny hetsika ara-dalàna sy mankany amin'ny gym, zavatra tokony hotadidina rehefa mandoa ireo toetra ireo.
Amin'ity tranga ity, Huawei dia nisafidy ny ARM Cortex-M, nefa tsy mampihatra amin'izany fomba izany ny mpanamboatra ny fanamboarana ireo izay fantatsika be. Vaovao tsara izany satria manasongadina ny fahaiza-manaon'ny Harmony OS, fa mampanontany tena antsika momba ny hoavin'ny mpanamboatra ny marika Aziatika. Raha ny momba ny fitadidiana RAM dia tsy manana fampahalalana manokana izahay, manana ny 4 GB amin'ny fitahirizana manontolo, fantatra kokoa amin'ny hoe «ROM».
Mikrôfonina mitambatra ho fandraisana antso
Fanoherana hatramin'ny ATM 5
Manana famantaranandro misy fifandraisana izahay WiFi taranaka faha-5.2 ary koa Bluetooth XNUMX noho izany dia manana fahafahana maro tsy misy tariby izahay. Tsy manana izany fotoana izany isika (eny amin'ny modely teo aloha) lny mety hampidirana eSIM na karatra SIM virtoaly, noho izany dia hanana fiankinan-doha tanteraka amin'ny finday ianao. Mifanaraka amin'ny Harmony OS, Android 6.0 ary ny iOS 9.0 ny fitaovana, ka mahatonga azy io ho safidy maro samihafa izay tsy hamela antsika hifanerasera amin'ny fampandrenesana ivelan'ny Huawei / Honor mora sy haingana. .
Sensors sy ny fampiasana isan-karazany
CAhoana raha tsy izany, ity Huawei Watch GT 3 ity Mandova sensor isan-karazany, ankoatra ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fo mahazatra sy ny metatra saturation oksizenina amin'ny ra, Huawei dia naniry ny hamadika ity Watch GT 3 ity ho solon'ny fanatanjahantena nefa tsy very na inona na inona, noho izany rehetra izany dia hiaraka amintsika ireto manaraka ireto:
Sensor mari-pana amin'ny vatana (ho velomina amin'ny fanavaozana ho avy).
Sensor fanerena rivotra (barometer).
Izany rehetra izany ankoatra ny rafitra fandrefesana marina ny toerana misy ny GPS, GLONASS, Galilleo ary mazava ho azy QZSS amin'ny dikan-teny rehetra. Ny toetra ara-teknika ivelan'ny efijery sy ny fahaleovan-tena dia zaraina amin'ny habe sy dikan-teny samihafa. Ary izany no fomba hirosoana amin'ny resaka momba ny efijery.
Ny version 46-milimeter (voazaha) dia misy tontonana AMOLED de 1,43 santimetatra izay mampiseho fitomboana kely raha ampitahaina amin'ny dikan-teny teo aloha, miaraka amin'ny famaha ny 466 × 466 ka manome ny hakitroky ny piksel 326PPI. Amin'ny lafiny iray, manana vahaolana mitovy amin'ny dikan-teny 42-milimeter izahay, noho izany dia mihamitombo hatrany amin'ny 352PPI ny hakitroky ny piksel, ny antsipiriany avy amin'ny fomba fijerintsika dia tsy azo tsapain-tanana eo amin'ny dikan-teny iray sy ny iray hafa.
Fampiofanana, fampiasana ary fahaleovan-tena
Momba ny customization ao anatin'ny AppGallery mahita ny rafitra Huawei manokana izahay spheres azo alaina mihoatra ny 10.000, Ny ankamaroany dia maimaim-poana, izay hanasarotra anao ny tsy hahita izay tianao. Izy io dia manana bezel mihodinkodina nohatsaraina, ary koa ny mombamomba ny bokotra fifaneraserana izay manana fikitihana mahazo aina kokoa sy mandeha amin'ny fomba fijerintsika.
Amin'ity fizarana ity dia mampanantena antsika i Huawei miaraka amin'ny TruSeen 5.0+ mazava kokoa amin'ny fandrefesana fanofanana, ary ny zava-misy dia tsara ny fitsapana nataontsika, mampiseho valiny azo oharina amin'ireo safidy avo lenta toa ny Apple Watch na ny Galaxy Watch, noho ny mpitsikilo sary valo.
Fanatsarana ny algorithm AI miaraka amin'ny tokonam-baravarankely 5LPM.
Fanamarihana momba ny fitepon'ny fo tsy ara-dalàna.
Mpanampy feo mitambatra.
Raha tsy manome antsika angon-drakitra marina amin'ny mAh, ny orinasa Aziatika dia nampanantena antsika 14 andro fahaleovan-tena izay tsy vitantsika, nijanona teo anelanelan'ny 11 sy 12 andro tamin'ny fampiasana tsy tapaka. Amin'ny ankamaroan'ny lafiny toy ny fampiharana sy ny fitantanana angon-drakitra, ny mpampiasa interface tsara ary ny traikefantsika amin'ny ankapobeny momba izany, ny famantaranandro dia tsy nanolotra fahasamihafana be amin'ny dikan-teny teo aloha, ary izany dia teboka tsara raha raisinay fa lavorary izy ireo. Izany rehetra izany dia fehezina amin'ny vidiny manomboka amin'ny 249 euros ho an'ny version 46 milimetatra ary 229 euros ho an'ny version 42 milimetatra, Namboarin'ny fanjakana araka ny fahaizany ny vidiny, indrindra fa ny fampifanarahana amin'ny tahan'ny kalitao sy ny vidiny izay sarotra hifanaraka amin'ny sehatra. Ho an'ny 329 dia hanana dikan-titanium izay tsy fantatra ny fisiany any Espaina amin'izao fotoana izao.
Jereo ny GT 3
Navoaka tamin'ny: Desambra 1 amin'ny 2021
Fanovana farany: Novambra 27 avy amin'ny 2021
Famolavolana tena voadio
Feno teknolojia sy safidy hafa, tsy misy sensor
Fahaiza-manao fanamboarana lehibe
Vidy tery tokoa
Tsy maintsy zatra amin'ny bezel mihodina isika
Ny interface interface dia tena vaovao ka mila fianarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Huawei Watch GT3 dia fanokanana fomba mahomby [Fandinihana]
Tesvor S4, mpanadio banga robot feno ho an'ny antonony [Famerenana]
Starkvind dia raikipohy IKEA amin'ny fanavaozana ny mpanadio rivotra [Analysis]